Fampiharana Netflix ho an'ny Mac - Azo atao ve ny misintona? - Fialam-Boly
Netflix dia indostrian'ny famoahana horonantsary malaza izay nanangona fankasitrahana eran'izao tontolo izao noho ny atiny qualitative. Ny orinasa dia nahavita nanitatra ny fanjakany tamin'ny ankamaroan'ny fitaovana rehetra. Androany ianao dia afaka mahita Netflix azo ampitaina amin'ny fitaovana marani-tsaina, lalao konsoly, fahitalavitra ary PC. Na izany aza, toa misy hevitra diso momba ny fisian'izy io amin'ny Mac.
Tsy isalasalana fa misy fampiharana iOS azo alaina ao amin'ny Netflix. Fa azo ampiasaina amin'ny macOS ho an'ny solosaina finday sy solo-saina? Izay ny sehatra hojerentsika anio. Andao hianarantsika ny zavatra entin'i Netflix eo amin'ny latabatra ho an'ny sehatra Mac.
Misy ve ny App Netflix ho an'ny Mac?
Tsy misy fampiharana ofisialy avy amin'ny Netflix ho an'ny Mac. Hafahafa kely izany, raha jerena fa manana kinova fampiharana iOS izy. Ny antony ao ambadiky ny tsy fisiany dia ny fanaovana fampiharana manokana ho an'ny MacOS, ny orinasa dia tokony hampiasa vola be. Izay fampiasam-bola amin'ny sehatra tery toa ny Mac dia mety hanjary fatiantoka lehibe. Noho izany, tsy sahy manome hevitra azy ny orinasa.
Ho solony, izy ireo dia nanome an'i Netflix ho an'ny Mac tamin'ny alàlan'ny web browser. Mitovy amin'ny fampiharana Netflix mahazatra izy io, ary afaka miditra amin'ny endri-javatra feno ianao. Andao hofaritana amin'ny fomba fampiasana Netflix ho an'ny Mac.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Netflix?
Ahoana ny fampiasana Netflix amin'ny Mac?
Azonao atao ny miditra amin'ny fampiharana Netflix amin'ny alàlan'ny fampiasanao tranonkala amin'ny Mac. Ity ny lisitry ny mpitety azonao ampiasaina:
Torolàlana isaky ny dingana ho an'ny fampiasana:
Tsidiho ny Netflix.com amin'ireo mpizaha tranonkala voalaza etsy ambony
Midira amin'ny alàlan'ny fampiasana mailaka sy teny miafina
Azonao atao ny misafidy ny mombamomba anao rehefa afaka miditra amin'ny Netflix ianao
Tadidio fa mila manana famandrihana marina ianao raha te hampiasa Netflix.
Ny interface interface dia mahitsy. Ao amin'ny pejy fandraisana, rehefa miditra ianao dia manana ny fampisehoana sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra. Na izany aza, azonao atao ny mizaha ireo sokajy arakaraka ny karazany. Azonao atao ny mampiasa ny safidin'ny fikarohana hahitana sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra. Raha tsy izany, raha tsy tadidinao ny anarana dia azonao atao ny manoratra ny anaran'ny mpilalao sarimihetsika na ny talen'ny talen-tsofina hahazoana ny valiny.
Mitovy amin'ny Netflix App, azonao atao ny mametaka ny kursor amin'ny sary na sainam-pirenen'ny sarimihetsika manokana na fampisehoana hahazoana fidirana amin'ny sinopsis. Afaka mahazo fampahalalana feno izay fantatra fa omen'i Netflix ianao.
Ahoana no filalaovana sarimihetsika Netflix na aseho amin'ny Mac?
Rehefa avy miditra sy mahita ny lohateny fampisehoana an-tsarimihetsika na fahitalavitra ianao dia ny tsindrio fotsiny no tokony hataonao. I Netflix dia hampiditra ny mpilalao tsy misy kilema azy ary hanomboka hivezivezy ny sarimihetsika. Azonao atao ny misafidy ny kalitao ananan'ny fisoratana anarana ary manamboatra fanovana hafa mifanaraka amin'ny safidinao. Mitovy amin'ny fampiharana mahazatra izany. Misy fandaharam-potoana, fiatoana, fandrosoana haingana, ary ireo interface hafa mitovy amin'izany hita amin'ny Netflix ho an'ny Mac amin'ny tranokala fitetezana tranonkala.
Misy safidy subtitle sy audio natokana natokana ho anao hisafidianana. Noho izany, azonao atao ny misafidy ny audio sy ny dikanteny amin'ny sarimihetsika na ny fandaharana azo jerena ao amin'ny Netflix.
Misy famerana ve ao amin'ny Netflix ho an'ny Mac?
Ankoatra ny zava-misy fa tsy manana rindrambaiko irery ianao dia tsy dia misy famerana ho an'ny Mac. Hita eran-tany izy io any amin'ny faritra rehetra misy an'i Netflix. Na izany aza, misy fameperana lehibe, araky ny browser ampiasainao.
Ho an'i Google, Mozilla, ary Opera, azonao atao ny miditra amin'ny kalitaon'ny horonantsary hatramin'ny 720P. Safari dia afaka manohana 1080P Raha manana kinova Mac antitra 11.0 ianao. Ho an'ny MacOS 11 sy ambony dia azonao atao ny miditra amin'ny kalitaon'ny 4K, noho ianao nisoratra anarana tamin'ny kalitao.
Raha tsy manana famandrihana momba ny kalitao ianao dia tsy afaka miditra ao.
Azo alaina ao amin'ny Netflix ho an'ny Mac ve ny Ultra HD sy HDR?
Eny. Ultra HD sy HDR dia misy ao amin'ny Netflix ho an'ny Mac. Na izany aza, mila ny MacOS 11.0 farany ianao. Hamarino fa mifanaraka amin'ny fampisehoana avo lenta ny Mac-nao mba hiasa ny streaming. Raha tsy izany dia mety ho be loatra ny rafitrao, na mety tsy mandeha izy.
Raha te hiditra amin'ny HDR na UHD dia mila ny kinova farany an'ny tranokala Safari ianao. Mazava ho azy fa tena ilaina ny misoratra anarana amin'ny atiny HD hidirana amin'ny kalitao. Raha vantany vao mahafeno ireo fepetra takiana ireo ianao dia afaka mandefa ny Ultra HD na HDR tsy misy fihemorana.
Azonao atao ve ny misintona ny atiny avy amin'ny Netflix amin'ny Mac?
Voafetra amin'ny streaming an-tserasera ny MacOS. Tsy misy fomba ahafahanao misintona afa-po amin'ny Mac. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia tsy misy amin'ny Mac ny atiny ivelan'ny Netflix, ary mila fifandraisana mahery vaika ianao. Na izany aza, misy ny fanamboarana famafana izay ahafahanao mijery atiny ivelan'ny Internet amin'ny Mac.
Raiso ny iO anao:
Raha manana fitaovana iOS toy ny iPhone na iPad ianao dia azonao atao ny misintona an'i Netflix. Aorian'izany dia azonao atao ny misintona ny atiny ankafizinao handefasana azy any aoriana hampiasaina ivelan'ny Internet. Ankehitriny, ahoana no anampian'izany anao amin'ny Mac?
Ny hany ilainao dia ny AirPlay na sehatra fizarana fizarana hafa mitovy amin'ny an'ny Apple fitaovana. Hahafahanao mampifandray ny fitaovana iOS amin'ny MacOS. Raha vantany vao vita izany dia ho hita eo amin'ny MacOS ny efijery ary afaka mijery atiny ivelan'ny Internet ianao. Ny hany lesoka amin'ity fizotranao ity dia ny mila tambajotra WiFi eo an-toerana ianao.
Misy fomba hafa ve ny App Netflix ho an'ny Mac?
Betsaka ny mpifaninana mandray anjara amin'ny hazakazaka hanome atiny kalitao premium. Hulu sy YouTube dia mpifaninana miavaka amin'ny Netflix hanome atiny streaming. Raha mitady rindrambaiko tena izy ianao dia afaka mampiasa ireo sehatra roa ireo. Apple koa dia nanolotra ny fampiharana Apple TV +, izay mihena ny atiny amin'izao fotoana izao, saingy mety ho hitantsika miakatra amin'ny ho avy izany. Azo alefa amin'ny Mac izy io.
Na dia tsy misy aza ny App Netflix ho an'ny Mac, raha mahazo tranokala mifanentana ianao dia afaka miditra amin'ny atiny. Tsy misy fotony izany ary tsy mametraka olana ankoatry ny fameperana tsy azo tsinontsinoavina toy ny tsy fisian'ny fisintomana ivelany.
Aza midina amin'ny fampiharana rehetra izay milaza fa Netflix ho an'ny MacOS. Raha tsy misy amin'ny tranokala ofisialin'ny Netflix, na Apple's Mac Store, dia tsy ho an'ny Mac izany. Arovy ny tenanao amin'izay mety ho fisolokiana amin'ny alàlan'ny sehatra sandoka hafa.
ny fomba fampidinana horonantsary youtube ho mp3 amin'ny android
Disney + ho eo amin'ny roku
tranokala aiza no hampidina sarimihetsika
ny fomba fametrahana roblox amin'ny solosaina
Ahoana ny fampidinana iTunes amin'ny Windows 8
ny fomba fanesorana roblox volo